स्वास्थ्य – " कञ्चनजंगा News "
घ्यु कुमारी यसरी प्रयोग गर्न जान्ने हो भने दर्जनौं रोगबाट मुक्त !
No Comments on घ्यु कुमारी यसरी प्रयोग गर्न जान्ने हो भने दर्जनौं रोगबाट मुक्त !
प्रायजसो सबैको घरमा सजिलै पाइने घ्युकुमारी एक जडीबुटी हो । यसलाई आयुर्वेदिक औषधीका रूपमा लिइन्छ । यो स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक हुन्छ ।घ्युकुमारी विभिन्न रोगहरूका लागि औषधीको रूपमा काम गर्छ । घ्युकुमारी सेवन गर्नु मानव स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक हुन्छ । यसको सेवन गर्दा हुने लाभहरू निम्न छन् ।
– दैनिक रूपमा घ्युकुमारी सेवन गर्दा यसले समग्र शरीर र आन्द्रामा जम्मा भएका विषाक्त पदार्थलाई हटाउँछ ।– घ्युकुमारीको जुस खाँदा रक्तसञ्चार सुचारु हुन्छ र कोलेस्ट्रोलको समस्या बढ्न पाउँदैन ।– शरीरका कोष तथा कोशिका बिग्रिएको भए यसको जुसले पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउँछ ।– घ्युकुमारी पानीमा मिसाएर खाँदा कब्जियत र दिसा नलाग्ने समस्याबाट मुक्ति पाइन्छ ।
– अपच हुने र ग्याँस फर्मेसनका कारण पेट र छाती दुखेमा घ्युकुमारी खाँदा ठिक हुन्छ ।– यसको जुसले शरीरमा चिनीको मात्रा सन्तुलित गर्छ ।– घ्युकुमारीको सेवनले गर्भाशयको रोग, पेटको खराबी, त्वचाको समस्याका साथै आँखाको घेराको कालो भाग हटाउन तथा शरीरमा रगतको कमी हुनबाट बचाउँछ ।
– यसको दैनिक सेवनले अनुहारको सौन्दर्य बढाउनुका साथै कपाल पनि बलियो बनाउँछ ।– शरीरको कुनै भाग आगोले पोलेमा, काटेमा यसको रस निकालेर लगाउनाले घाउ निको हुनुका साथै आराम मिल्छ ।– अनुहार लगायत शरीरको कुनै पनि भागमा गाढा दाग छ भने दिनहुँ घ्युकुमारी लगाउने दाग हराउँदै जान्छ ।– आँखा वरिपरिको डार्क सर्कल पनि घ्युकुमारी नियमित लगाउनाले हराउँछ ।
सावधान ! यी खानेकुरा खाली पेट खाँदै हुनुहुन्छ ? निम्तिन सक्छ अल्सर र क्यान्सरसम्मको रोग
No Comments on सावधान ! यी खानेकुरा खाली पेट खाँदै हुनुहुन्छ ? निम्तिन सक्छ अल्सर र क्यान्सरसम्मको रोग
काठमाडौँ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदनअनुसार संसारभर पेटभर खान नपाउनेको संख्या धेरै नै छ । करोडौँ नागरिक कुपोषणका कारण मृत्युको मुखमा पर्ने गरेका छन्। तर खाना खान पाउने व्यक्तिमा पनि विभिन्न खालका स्वास्थ्य समस्या निम्तिने गरेको छ ।
केहीलाई आवश्यकता भन्दा धेरै खानेकुराले असर गरेको छ। हामी मध्ये केहीले कतिखेर के खाने ? भन्ने जानकारी नपाउँदा स्वास्थ्य समस्या झेल्ने गरेका छौँ । आज हामीले खाली पेटमा खान नहुँने खानेकुराका बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्दैछौँ।
दूध चिया: नेपाली समाजमा चियालाई संस्कारको रुपमा लिने गरिन्छ । कुनै नयाँ ठाउँमा गएमा सबैभन्दा पहिले चियाबाट सम्मान गरिन्छ । कतिपयलाई त बिहान उठेपछि दुध चिया नखाए फ्रेस नै नहुने लत बसिसकेको हुन्छ । बिहान उठेर चिया नपिए जाँगर त चल्दैन भनेर धेरैले टिप्पणी गर्छन् । तर, एकबिहानै खाली पेटमा दूध हालेको चिया खानुहुन्छ भने अब स्वास्थयबारे सोच्ने बेला भयो । दुध चियाले तपाईंको पेटमा ग्याँस्ट्रिकको समस्या असाध्यै बढाउँछ। यसले तपाईँको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुर्याइरहेको छ । चिकित्सकहरुले दूध चिया खाली पेटमा खान नहुने बताएका छन्।
गोलभेंडा:गोलभेंडा स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ । तर खाली पेटमा गोलभेंडा खादा त्यसले प्रतिकूल असर गर्छ । फेसमा चमक ल्याउन समेत यसको प्रयोग हुन्छ । खाली पेटमा गोलभेंडा खाँदा यसमा हुने अम्लले पेटमा रहेको ग्यास्ट्रोइंटस्टाइनल एसिडसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गर्छ । परिणामस्वरुप पेट दुख्ने, ग्यास्टिक हुने, पेट पोल्ने, बान्ता हुने, पत्थरीको संभावना बढ्नेजस्ता स्वास्थ्य समस्या निम्तिने गरेका छन्। त्यसैले चिकित्सकहरुले गोलभेंडा पनि खाली पेट खान नहुने बताएका छन्।
चिसो पेय पदार्थ: खाली पेटमा चिसो पेय पदार्थ पनि पिउनु हुँदैन । जस्तै कोल्ड कफी वा कोल्ड ड्रिन्क्स वा सफ्ट ड्रिन्क्स खाली पेटमा खानु हुँदैन। खाली पेट चिसो पेय पिउने व्यक्तिको पाचन क्रिया नै सुस्त हुन्छ। पेय पदार्थमा हुने कार्बोनेट एसिड पेटको एसिडसँग मिसिँदा गम्भीर समस्या निमित्न सक्छ । पेटमा ग्यास भरिने, वाकवाकी हुने, वान्ता हुने, असहज हुने लगायतका स्वास्थ्य समस्या निम्तिने गर्छन्।
औषधि: खाली पेटमा औषधि खाँदा होसीयार हुनुपर्छ । औषधिमा रहेको तत्व शरीरभित्र रहेका तत्त्वसँग सिधै मिलेर रासायनिक प्रतिक्रिया दिँदा ठूलै समस्या निम्तन सक्छ । त्यसैले धेरै प्रकारका औषधि खाना खाएपछि मात्र खानुपर्छ । चिकित्सकले एन्टासीडलगायतका सीमित औषधि मात्र खाली पेटमा खानका लागि सुझाब दिन्छन् । अन्य औषधि खाली पेट खाँदा रोग निको हुनुको सट्टामा झन्झन् स्वास्थ्य समस्या बढ्ने देखिन्छ । नयाँ स्वास्थ्य समस्या थपिने गरेको एक अनुसन्धानले देखाएको छ
मसालेदार खाना: ब्रेकफास्टमा मसालेदार खाना खानु पनि स्वास्थ्यका लागि घातक मानिन्छ । मसलेदार, स्पाइसीले स्वास्थ्यमा ठूलो समस्या ल्याउँछ । सुरुमै तपाईले मसालेदार र स्पाइसी खानेकुरा खाँदा एसिडिटीको समस्या निम्तिन्छ। यसले पेट पोल्ने, डकार आउने, अल्सर हुने र क्यान्सरसम्म निम्तिन सक्ने विभिन्न प्रतिवेदनले देखाएको छ।
केरा: खाली पेटमा केरा कहिल्यै खानु हुँदैन । केराले छिटो तौल बढाउन मद्दत गर्ने भएकोले दुब्लो पातलो मानिसहरु बिहानै केरा खाने गर्छन् । तर बिहानै केरा खानु स्वास्थ्यका दृष्टिकोणबाट राम्रो होइन्। केराले हाम्रो शरीरमा म्याग्निसियमको मात्रा दुई गुणा बढ्छ र शरीरमा रहेको क्याल्सियमसँग रासायनिक प्रतिक्रिया सुरु हुन्छ। परिणामस्वरुप पेट फुल्ने, ढुस्स हुने, डकार आउने, अपच हुने तथा एसिडीटि बढ्ने जस्ता समस्या देखिने हुन्छ । त्यसैले खाली पेटमा केरा खानु हुँदैन।
सोडा: खाली पेटमा सोडा खाँदा पनि उत्तिकै जटिल समस्या देखिन्छ । सोडा खाँदा पेटको अम्लसँग मिलेर राशायनिक प्रतिक्रिया सुरु हुन्छ र पेट दुख्ने समस्या बढ्छ। पेट फूल्ने, पेट पोल्ने, दिसा लागेजस्तो हुने, अपच हुने, छाति पोल्ने हुनसक्छ।
सखरखण्ड: सखरखण्डमा प्रशस्त प्रोटिन हुन्छ । खाली पेटमा यसको सेवन राम्रो हुँदैन । सखरखण्डमा अधिक मात्रामा हुने प्रोटिनले ग्यास्ट्रिकको समस्या बढ्छ। परिणामस्वरुप पेट पोल्ने, पेट दुख्ने, जलन र पेट फुल्ने समस्या हुन्छ । त्यसैले सखरखण्ड बिहानै खाली पेटमा नखानु राम्रो हुने विभिन्न अध्ययनमा उल्लेख छ।
रक्सी: रक्सी र रक्सी जन्य खानेकुराहरु खाली पेटमा खानु पनि विष सरह मानिन्छ । यो कुरा विभिन्न अनुसन्धानले पनि पुष्टि गरेको छ। खाली पेटमा घरेलु मदिराको सेवनले मानिसको मृत्यु समेत भएका विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार आइरहेका छन्। चिकित्सकहरुले बिहान केही नखाइकन अल्कोहलजन्य पदार्थ खान नहुँनेमा जोड दिएका छन् । यसले मानिसलाई मृत्युको मुखमा समेत लैजाने सम्भावना हुन्छ।
No Comments on महिनावारीमा पेट दुख्ने समस्याले हैरान हुनुहुन्छ ? छुटकारा पाउन अपनाउनुहोस् यी उपाय
किशोरी अवस्थामा समस्या धेरै प्रकारका हुन्छन्। किशोर अवस्था महिलाका लागि संवेदनशील समय पनि हो। यो बेला शारीरिक र मानसिक सबै खाले परिवर्तन हुन्छ।
महिनावारी हुँदा तल्लो पेट र ढाड दुख्नु सामान्य नै मानिन्छ । महिनावारी हुनुभन्दा केही दिन पहिले शरीरमा भएको रागरसको मात्रामा परिवर्तन आउने गर्दछ ।यस्तो रागरसको सहयोगले बच्चा हुर्कनका लागि पाठेघरको भित्र उपयुक्त वातावरण बनिरहेको हुन्छ । यस प्रक्रियाका कारणले पनि तल्लो पेट र ढाड दुख्ने गर्दछ ।
यदि पाठेघरले निषेचित डिम्ब प्राप्त गरेन भने त्यो निर्माण भएको रगतको तह विस्तारै रगतका रूपमा योनिमार्ग हुदै बाहिर निस्कन्छ र यस बेला पाठेघर खुम्चिने र फुक्ने हुदा यस्तो प्रकारको दुखाइ हुने गर्दछ ।
यही रागरसको परिवर्तनले गर्दा महिनावारी हुनुअघि कब्जियत हुने, थकाइ लाग्ने तथा कसै कसैलाई डन्डीफोर आउने जस्ता लक्षणहरू पनि देखा पर्दछन् ।घरेलु तरिका अपनाएर महिनावारी हुदा पेट दुख्ने समस्यालाई समाधान गर्न सक्छौ । रुमाल वा आधा मिटर जति सुतीको कपडाको टुक्रालाई तातो पानीमा भिजाएर र पेटको वरिपरि सेकाउन सकिन्छ । त्यसै गरी तातो पानीलाई रबडको थैली मा राखेर दुखेका ठाउमा विस्तारै सेक्न पनि सकिन्छ ।
रबडको थैली नभएका खण्डमा सिसी मा तातो पानी राखी दुखेका ठाउमा सेक्न सकिन्छ । त्यसै गरी दुखेका ठाउमा विस्तारै हलुका मालिस गर्नाले पनि दुखाइ कम हुन्छ । यस्तो बेला जति सक्दो तातो पानी, चिया र सुपका साथै अन्य गेडागुडीको झोल, हरियो सागसब्जी खानु पर्छ जसले शरीरलाई कमजोर हुन दिदैन । हलुका व्यायाम गर्नाले पनि दुखाइ कम हुन्छ ।
१. दुधः दुध क्याल्सियमको निकै राम्रो स्रोत हो, महिनावारीको पीडालाई कम गर्न एक ग्लास दुध पिउने गर्नुहोस् यसले क्याल्सियमको कमीलाई पुरा गरीदिनेछ र पीडाबाट आराम मिल्नेछ ।२. मेवाः महिनावारी भएको बेला खानाले फाइदा पु-याउँछ । धेरैपटक महिनावारीको दौरान रक्त प्रवाह सहि तरिकाले हुने गर्दैन जसका कारण अझ पीडा हुने गर्दछ । यस्तो अवस्थामा मेवाको सेवन गर्नाले रक्त प्रवाह ठिक तरिकाले हुने गर्दछ र पीडा पनि कम हुने गर्दछ ।
३. गाजरः गाजरले आँखाको लागि राम्रो गर्ने मात्र नभई महिनावारीको पीडालाई पनि कम गर्ने गर्दछ । स्त्रीरोग विशेषज्ञका अनुसार, एक ग्लास गाजरको रस पिउनाले महिनावारी भएको बेला रक्त प्रवाह राम्रो तरिकाले हुने गर्दछ र पीडाबाट पनि राहत मिल्ने गर्दछ ।४. घिउकुमारीः महिनावारीको दौरान एक चम्चा महमा यसलाई मिसाएर खानाले भइरहेको पीडालाई कम गन गर्र्दछ ।
५. तुलसीः पीडा भइरहेको बेलामा तुलसीको पातलाई चियामा मिसाएर खानुहोस् । तुलसीमा भएको क्याफीड एसिडले महिनावारीको पीडालाई कम गर्न गर्दछ । धेरै पीडा भइरहेको छ भने ७–८ वटा तुलसीको पातलाई आधा कप पानीमा हालेर उमाल्नुहोस् र त्यसलाई छानेर त्यसको पानी पिउनुहोस् ।
६. तातो पानीले नुहाउनुहोस्ः तातो पानीले नुहाउनाले रक्त प्रवाह राम्रो गरेर पीडा कम हुने गर्दछ ।७. अदुवाः एक कप पानीमा अदुवालाई काटेर उमाल्नुहोस् । यदि यसको स्वाद मिठो लागेन भने थोरै नुन पनि हाल्नुहोस् र खाना खाइसकेपछि दिनको तीन चार पटक खाने गर्नुभयो भने पीडाबाट मुक्ति पाइन्छ ।
८. व्यायामः हुन त हामीले दिन दिनै व्यायाम गर्नु जरुरी छ तर महिनावारीको पीडा भएको बेलामा व्यायाम अत्यावश्यक कुरा हो । उक्त प्रवाहलाई राम्रो गराउन व्यायामको निकै आवश्यकता पर्ने गर्दछ ।९. बिहान हरेक दिन खाली पेटमा ५० ग्राम भिजाएको खजुर खाने पानी पनि लाभदायिक हुन्छ ।१०. चुकन्दरको ताजा रस सानो गिलासको ,१ गिलास दैनिक बिहान १ महिना सम्म पिउनाले आइरन क्याल्सियम र अन्य मिनिरलसको मात्रा बढी पाइने हुँदा दुखाईलाई मद्दत पुग्दछ ।
No Comments on भुलेर पनि फेरि तताएर नखानुहोस् यी खानेकुरा, बिष सरह बन्छ !
व्यस्त जीवनशैलीमा हामी धेरैजसो कि बाहिरको खाना खान्छौ, कि त घरमै भएका खाना सेलाएपछि तताएर खान्छौँ वा दुई पटक खाने खाना एकै पटक पकाएर राख्छौ र पछि तताएर खान्छौ ।
तर, के तपाईलाई थाहा छ, कुनै – कुनै खानेकुरा सेलाएपछि तताएर खाएमा स्वास्थ्यलाई हानि गर्छ ? त्यसो भए, जान्नुहोस्, कुन–कुन खाना फेरि तताएर खान मिल्दैन ।
आलु – आलुलाई दोहोर्याएर तताएमा त्यसमा भएको सबै पोषक तत्व नास भएर जान्छ । यस्तो अवस्थामा तपाई आलु खाएर पेट त भर्नुहुन्छ, तर कुनै पोषक तत्व पाउनुहुन्न । यतिमात्रै होइन यसले तपाईको शरीरलाई पनि असर गर्छ ।
पालुंगो साग – पालुंगोको सागलाई पनि दोहोर्याएर तताएमा यसमा भएको सबै पोषक तत्व नास भएर जान्छ । त्यसैले दोहोर्याएर तताएर नखानुहोस् ।
मासु – कुनै पनि प्रकारको मासुजन्य खानेकुरालाई तताएर खान हुँदैन । यसो गरेमा बिष बन्छ र तपाई बिरामी पर्न सक्नुहुन्छ ।
च्याउ – च्याउलाई कहिल्यै दोहोर्याएर तताएर खाने नगर्नुहोस् । यसो गर्नु तपाईको स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ ।
के तपाईको घाटी सधैखराब हुन्छ दुख्छ? यसो गर्नुस
No Comments on के तपाईको घाटी सधैखराब हुन्छ दुख्छ? यसो गर्नुस
के तपाईंको घाटिमा हमेशा खराश रहन्छ ? यो मौशम परिवर्तनको असर् हो भनेर वा खान पानमा आएको परिवर्तनको असर् भनेर नबस्नुहोस् । गलाको खराश टन्सिल वा गलाको गम्भिर समस्या पनि हुन सक्छ । कसरी बच्ने यसबाट ? यो पढ्नुहोस् | मौसमको बदलाव संगै गलामा हल्का खरास हुनु वा गलमा तिखो घोचाइ महसुश हुनु सामान्य कुरा हो । यो अवस्थामा गलामा खिच खिच हुनु र बोल्नमा समस्या हुनु सामान्य हो ।भाईरस वा ब्यक्टेरिय को करणले यो समस्या देखिन्छ । कहिले कही एलर्जी र धुमपानको करणले पनि गलामा खराश हुन्छ । यस्ता धेरै समस्याहरु आँफै समाधान हुन्छन तर केही यस्ता जिद्दी समस्या हुन्छन जो सजिलै जादैनन । त्यस्ता समस्यालाई राम्रो इलाजको जरुरी हुन्छ ।
आमरुपमा मानिशहरू गलाको खराशलाई त्यती ध्यान दिदैनन र लापरबाही गर्छन् तर यो समस्या त्यती सजिलो छैन र राम्रो उपचार गरिएन भने गम्भिर समस्या निम्त्याउन सक्छ । गलामा आउने खराश गलको इन्फेक्सन हो । जसमा गलामा कर्कश आवाज आउने, हल्का कासो लाग्ने र हल्का ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, गला दुख्ने जस्ता लक्षण देखिन्छन ।हाम्रो गलामा दुबैतर्फ टन्सिल हुन्छ जसले धुलो, ब्यक्टेरिया र भाईरशलाई गलामा जानबाट रोक्ने काम गर्छ । तर कहिले कही यो आँफै इन्फेक्टेड हुन्छ र आफ्नो काम गर्न सक्दैन । जसलाई टॉन्सिलाइटिस भनिन्छ । जसमा घाटी भित्र दुबैतर्फ टॉन्सिल्स गुलाबी वा रातो हुन्छ । इन्फेक्सन हुँदा यिनिहरु अली ठुला र अली बढी राता हुन्छन । कहिले कही यसमा सेतो कत्ला जस्तो पनि देखिन सक्छ ।
सधरणतया यो समस्या उचित देखभाल र एन्टिबायोटिकले निको हुन्छ तर स्ट्रेप्टोकॉक्कस हिमोलिटीकस नामक भाईरसको करणले यो समस्या देखियो भने अलिक गम्भिर हुन्छ ।तव यो संक्रमण ह्रीदय र गुदामा पनि फैलिन्छ र गम्भिर हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नियमित रुपमा नुन हालेको मनतातो पानीले गार्गेलिङ गर्नुपर्छ । गलामा आराम मिल्छ ।अदुवा, इलायची र मरिचको चियाले गलाको खराशमा अधिक आराम मिल्छ । यसमा जीवाणुरोधक गुण पनि हुन्छ र यो चिया नियमित रुपमा सेवान गर्नाले गलामा आराम मिल्नुको साथै गलाको खराश हराएर जान्छ ।धुमपान र ज्यादा मसालेदार खानादेखी टाढै रहनुहोस् ।
खानामा बिशेष साबधानी आपनाउनुहोस् । फ्रिज को वा अन्य कुनैपनी चिसो चिजको सेवान नगर्नुहोस् । सधैं मनतातो पानी पिउने गर्नुहोस् । त्यसमा अदुवाको धुलो हल्का मिसाउने र ताजा कागतीको रस १,२ थोपा मिलाउनाले अधिक आरमा मिल्छ । सावधानि नै यो समस्याको मुल हल हो ।सधैं धुलो, धुवा र चिसो बाट बच्नुहोस् , राम्रो मास्कको प्रयोग गर्नुहोस् । समस्या देखिनासाथ तुरन्त चिकित्कसको सल्लाहा लिनुहोस् । यो प्राय केटा केटीहरुलाइ लाग्ने रोग हो तर जुनसुकै उमेरमा पनि लग्न सक्छ्र घाटी दुखने, थुक निल्दा वा खान खादा अफ्ठयारो हुने , ज्वरो आउने प्राय यो रोगका लक्षण हुन््र टन्सिल लिम्फाइड नामक एक विशेष प्रकारको तन्तुहरुको समूह हो । यो मुखको भित्री भाग जिब्रोको अन्तिम भागतिर एजबचथलह नाकको बीचमा रहेको हाडमा रहेको हुन्छ । टन्सिलले हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक प्रणालीमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउने गर्दछ । टन्सिलबाट लिम्फोसाइट र मोनोसाइट नामक दुई कोषको निर्माण हुन्छ जुन हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको महत्वपूर्ण अंश हो ।
यसका साथै टन्सिलले म्याक्रोकाज नामको कोष पनि निर्माण गर्दछ । यो कोषले यो प्राय केटा केटीहरुलाइ लाग्ने रोग हो तर जुनसुकै उमेरमा पनि लग्न सक्छ्र घाटी दुखने, थुक निल्दा वा खान खादा अफ्ठयारो हुने , ज्वरो आउने प्राय यो रोगका लक्षण हुन््र टन्सिल लिम्फाइड नामक एक विशेष प्रकारको तन्तुहरुको समूह हो । यो मुखको भित्री भाग जिब्रोको अन्तिम भागतिर एजबचथलह नाकको बीचमा रहेको हाडमा रहेको हुन्छ । टन्सिलले हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक प्रणालीमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउने गर्दछ । टन्सिलबाट लिम्फोसाइट र मोनोसाइट नामक दुई कोषको निर्माण हुन्छ जुन हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको महत्वपूर्ण अंश हो । यसका साथै टन्सिलले म्याक्रोकाज नामको कोष पनि निर्माण गर्दछ । यो कोषले शरीरभित्र प्रवेश गरेका जीवाणुलाई नष्ट गरेर हामीलाई रोग लाग्नबाट बचाउँछ। विभिन्न कारणले गर्दा यी टन्सिलमा संक्रमण भएर सुन्निनुलाई नै टन्सिलाइटिस भनिन्छ ।
कारणहरु जीवाणु सरेर हुन सक्छ्र,सामान्य ब्याक्टेरियाहरु बाट हुनसक्छ्र,मुख र दातको राम्रोसंग सफाई नगर्नु्र , कुपोसन तथा घनावस्ती भएको ठाउमा हुनसक्छ्र रोगको विकास कान दुख्ने टाउको दुख्ने सम्पूर्ण शरीर गलेको दुखेको अनुभव हुनु कब्जियत र पेट दुख्ने समस्या पनि तीव्र टन्सिलाइटिसमा देखा पर्न सक्छ । मुखभित्र हेर्दा टन्सिलहरु सुन्निएका र रातो हुन्छ । कहिलेकाहीं यी दुई टन्सिल बढेर झण्डै एक अर्कासँग जोडिन पुग्छन् । जीर्ण टन्सिललाइटिसमा समय समयमा घाँटी दुखिरहने घाँटीमा केही अड्केको जस्तो अनुभव भइरहने मुख मीठो नहुने सास गन्हाउने जस्ता लक्षण हुनसक्छ ।
लक्षणहरु सुरुमा बिरामीलाइ घाटीमा अफ्ठयारो हुनछ्र , भोक नलाग्ने र अल्छि लाग्न सक्छ्र, बिस्तारै ज्वरो आउन थाल्छ्र, टन्सिलहरु सुनिएको र रातो रातो देखीन्छ, त्यसपछि पनि निक्लिन थाल्छ्र, पिप बग्ने वा सुजन हुनछ्र,लिम्फमा तन्तुहरु सुनीन्छ र कडा हुन्छन्र,उपचार,आराम गर्नु पर्छ्र,झोल कुराहरु खानु पर्छ्र,ज्वरो कम गर्ने र दुखाई कम गर्ने एनेल्जेसिक दिनुपर्छ्र,चिसो र चिल्लो वाट टाडै रहनु पर्छ ।
दात दुखेर निकै तनावमा हुनुहुन्छ एक रातमै दात खाने किरा चट पार्ने घरेलु उपचार (हेर्नुहोस भिडियो सहित)
No Comments on दात दुखेर निकै तनावमा हुनुहुन्छ एक रातमै दात खाने किरा चट पार्ने घरेलु उपचार (हेर्नुहोस भिडियो सहित)
काठमाडौँ । एक तथ्यांक अनुसार नेपालमा झन्डै ८० प्रतिशत मानिसहरु दातको समस्याबाट ग्रसित छन् । हाम्रो मुख भित्र हुने ७ सय देखी ९ सय प्रकारका ब्याक्टेरिया हुन्छन् । त्यस मध्येको एक हो एक हो ‘स्टेप्टोकोकस ब्याक्टेरिया’ ।
हामीले खाएका पदार्थहरु जब दा“त र गीजाको बीचमा दाँतको चपाउने भागमा वा दाँतहरुबीचको कापमा दन्तलेउको रुपमा अड्केर बस्छ स्टेप्टोकोकस ब्याक्टेरियाले तत्काल एसिड उत्पादन गर्न थाल्छ ।सो एसिडले बाहिरी तह अर्थात ‘इनामेल’ खिइन थाल्छ । सोही खिएको ठाँउबाट दाँतको भित्रीभागमा छिर्छ ।
र जति भित्र जान्छ संक्रमण बढाउदै जान्छ ।दात लाई जोगाउन अनेक प्रयास गरे पनि कहिले काही दात किराले खाने गर्दछ । दातलाई किराले खान बाट रोक्न सर्ब प्रथम सफा गरि रहन पर्दछ । खानपिन पछि दातलाई सफा गरि हाल्नु पर्दछ जसले दातमा टासिएको खाने कुरा नरहोस् ।
बिशेष गरेर गुलिउयो मिठाई खाए पछि दातलाई तुरुन्तै सफा गर्नु पर्दछ । गुलियोमा दात किराले खाने प्रबल सम्भावना हुन्छ । तर यी सबै गर्दै गर्दै पनि दात किराले खायो भने कसरी त्यसबाट छुटकारा पाउने त ! अपनाउहोस यी घरेलु उपाय ….।कसरी अपनाउने घरेलु उपाय भिडियोमा हेर्नुहोस:
No Comments on ढाड दुखेर हैरान हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् समाधान गर्ने उपायहरु
काठमाडौं -अचेल धेरैलाई ढाड दुख्ने समस्या हुन्छ । थोरै केही काम गर्योकी ढाड दुखी हाल्छ । खासमा उचित व्यायाम नगर्नाले र बसिरहदा ढाड दुख्ने समस्या देखा पर्छ ।
चिकित्सकहरु ढाड विभिन्न कारणले दुख्ने बताएका छन् । पेटको समस्या,पिसाबको संक्रमण ,मिर्गौला सम्बन्धी समस्या,मेरुदण्डको क्यान्सर ,सुत्दा नमिलेरवा सुतिरहदा पनि ढाड दुख्ने गर्छ ।
ढाड दुख्ने समस्या भएमा खुट्टा झमझमाउने। हिँड्दा खुट्टा कमजोर हुने, दुखेको ठाउँमा तातो हुँदै जाने आदी हुन्छ । यस्तो भएमा बिभिन्न उपायहरु अपनाउन सकिन्छ ।
ढाड दुख्ने समस्या छ भने नियमित व्यायाम गर्ने गर्नुपर्छ । त्यस्तै लामो समयसम्म मेचमा बस्नु हुँदैन मेचमा बस्नु परेमा कम्मरमा बेल्ट लगाउनुपर्दछ । ढाड दुखीरहेमा पिसाब वा रगतको जाँच गर्नुपर्दछ
त्यस्तै क्याल्सियमको कमीका कारण पनि ढाड दुख्ने हुनाले पर्याप्त मात्रामा दूध, दही खानु पर्दछ । त्यस्तै फिजियोथेरापीद्वारा ढाड दुख्ने समस्या कम गर्न सकिन्छ । चोटपटकका कारण ढाड दुखेमा आराम गर्नुर्दछ ।
यस्तै ढाड दुखाई नियमित व्यायाम गरेर, दुग्धजन्य पदार्थको सेवन गरेर, तीनदेखि छ महिना क्याल्सियमको सेवन गर्ने तथा गम्भीर किसिमको दुखाइलाई कम गर्न सकिन्छ ।
अनुहारमा भएका डण्डीफोरका पूराना दाग-धब्बा हटाउने घरेलू उपाय – थाहा पाइराखौ
No Comments on अनुहारमा भएका डण्डीफोरका पूराना दाग-धब्बा हटाउने घरेलू उपाय – थाहा पाइराखौ
आजको समयमा सबै आफुलाई राम्रो देखाउने प्रयास गर्छन्| त्यसको लागि मानिस थारि-थरिका चिज प्रयोग गर्छन्| वास्तवमा, गलत खानको कारणले अनुहारमा डण्डीफोर तथा दाग-धब्बा आउँछ।
यी समस्याको निधान सजिलै गर्न सकिन्छ, तर यदि ढिला गर्यो भने यो निकै मुश्किल हुनसक्छ| घरमै बनेको यो फेस प्याकको नियमित प्रयोगले अनुहारको दाग-धब्बाको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ|
सुन्तलाको बोक्राको पाउडर
सुन्तलाको बोक्राको पाउडरबाट बनेको फेस प्याकको प्रयोगले अनुहारमा रहेका दाग-धब्बा बाट छुटकारा पाउन सकिन्छ| यसको लागि, एक चम्चा सुन्तलाको बोक्राबाट बनेको पाउडरमा दुध र चिनी मिलाएर यसको फेस प्याक तयार गर्नुहोस् !
अनुहारमा लगाएर यसलाई सुक्न दिनुहोस्| सुकिसकेपछि चिसो पानीले मुख धुनुहोस्| सुन्तलामा हुने साईट्रिक एसिडले अनुहारमा रहेको धब्बा हटाउँछ|
छालामा रहेको दाग-धब्बाबाट छुटकारा पाउन आलुको रसको प्रयोग सबैभन्दा उत्तम उपाय मानिन्छ| आलुको रस निकालेर त्यसमा चिनी मिलाएर अनुहारमा लगाउनाले अनुहारमा रहेका दाग-धब्बा हट्छ|
ग्रीन टी फेस प्याक
अनुहारको डण्डीफोरबाट छुटकारा पाउन र दागहरू हटाउनको लागि दुई चुटकी बेसार, एक चम्चा ग्रीन टी र एक चम्चा ग्राम आटा मिलाएर पेस्ट बनाउनुहोस्।
अनुहार राम्रोसँग धुनुहोस् र अनुहारमा तयार पारेको पेस्ट लगाउनुहोस्। बीस मिनेट पछि, कपासमा गुलाब जल प्रयोग गरेर सुख्खा प्याकलाई भिजाउनुहोस् र लगाएको प्याक अनुहारबाट हटाउनुहोस्।
यो पनि पढ्नुहोस ! सुतेको बेलामा तपाइको मुखबाट र्‍याल चुहिन्छ ? यसरी रोक्नुस्
काठमाडौं । मुखबाट –याल निस्कनुका धेरै कारण छन् । कुनै खानेकुराको एलर्जी हुँदा वा औषधिले गर्मी गराउँदा –याल चुहिन्छ ।यो राम्रो कुरा हो किनकि –यालले नै मुखलाई गिलो राख्छ ।
त्यस्तो समस्या हुँदा तकिया पनि फोहर हुन्छ अनि सँगै सुतेको मानिसका अगाडि लाजमर्दो पनि हुन्छ ।तर यसलाई रोक्न पनि सकिन्छ । यस्ता छन् उपायः
रातिको खानामा नपच्ने खानेकुरा नखानुस् । अनि सुत्नुअघि दुईतीन तुलसीको पात चपाउनुस् र अलिकति पानी पिउनुस् । दुईतीन दिनसम्म यो उपाय गर्नुभएमा –याल चुहिन छोड्छ ।
स्तनलाई स्वस्थ राख्न र राम्रोसँग सजाउने यी हुन् ८ तरिका
No Comments on स्तनलाई स्वस्थ राख्न र राम्रोसँग सजाउने यी हुन् ८ तरिका
तपाई सचेत हुँदा हुदै पनि कतिपय तपाईका जीवन शैली र आतदले तपाईको स्तनको स्वास्थमा गम्भीर अशर गरेको हुन सक्छ । तपाईको स्तनलाई सदा स्वस्थ र ठूलो आकारमा सजाई राख्न तपाईले तलका विषयमा ध्यान दिनुपर्छः
स्तनमा मासु पलाएमा चासो दिनुहोसः यदि स्तनमा सानो डल्ला वा गाँठो देख्नुभयो भने तत्काल स्तनको एक्सरे गरि रोग भए नभएको पहिचान गर्नुपर्छ । त्यस्तै स्तनबाट रगत वगेको छ भने तत्काल चिकित्सककहाँ जानुपर्छ । यदि तपाई आफ्नो स्तनको आकारदेखि दिक्क हुनुहुन्छ र स्तन प्रत्यारोपण गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने एक पटक राम्रोसँग सोच्नुहोस ।एजेन्सी
छामेर पत्ता लगाउनुस् स्तन क्यान्सर
No Comments on छामेर पत्ता लगाउनुस् स्तन क्यान्सर
बलिउडमा सफल नेपाली चेली मनिषा कोइरालालाई डिम्बाशयको क्यान्सर भएपछि अमेरिकामा उपचार गरेर निको भइन्। हलिउडकी चर्चित अभिनेत्री एन्जेलिना जोलीले क्यान्सरको जोखिमबाट बच्न आफ्ना दुवै स्तन फाल्न लगाइन्। यसबाट के शिक्षा मिल्छ भने क्यान्सर जोसुकैलाई लाग्न सक्छ र उपचार गराउने क्षमता राख्नुपर्छ। तर, सबैमा त्यस्तो आर्थिक क्षमता हुँदैन। क्यान्सर सम्बन्धी होशियारी भने सबैले राख्न सक्छन्।
महिलाहरूलाई धेरैजसो स्तन, डिम्बाशय, आन्द्रा र पाठेघरको क्यान्सर हुने गरेको देखिन्छ। तीमध्ये यहाँ स्तन क्यान्सरको चर्चा गरिन्छ। महिलाको सहायक प्रजनन अङ्ग हुन्, स्तन। यी विशेष ग्रन्थीहरू शिशुको पोषणको लागि जस्तै यौनको दृष्टिकोणले पनि महत्वपूर्ण छन्। चिकित्सा विज्ञानको दृष्टिले ग्रन्थी, बोसो र रेसादार तन्तुहरूले बनेको पिण्ड हो– स्तन।
स्तन छातीको मांसपेशीको भित्तामा रेसीय तन्तुको मद्दतले टाँसिएको हुन्छ। स्तनभरि नै मुख्यतः बोसोयुक्त तन्तु हुन्छ। यसैले स्तन मुलायम र निश्चित आकारको हुन्छ। यसमा दूध बनाउने ग्रन्थी, दूध ग्रन्थीबाट मुन्टासम्म दूध ओसार्ने नलीहरू, मुन्टा वरिपरिका भाग, रेसीय तन्तु एवं बोसो हुन्छ। शरीरको अन्य भागमा झैं स्तनका कोषहरूमा पनि असामान्य, अनियन्त्रित र अनावश्यक वृद्धि हुन गई गिर्खा, गाँठागुठी तथा निको नहुने घाउ बन्ने अवस्थालाई स्तन क्यान्सर भनिन्छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपालमा वर्षेनि एक लाखमा २१.८ महिलामा स्तन क्यान्सर हुन्छ। तीमध्ये १० जनाको मृत्यु हुन्छ। महिलामा हुने सम्पूर्ण क्यान्सरजन्य मृत्युमध्ये २० प्रतिशत मृत्यु स्तन क्यान्सरले गराउँछ। पुरुषको दाँजोमा महिलामा स्तन क्यान्सर सय गुणा बढी हुन्छ।
स्तन क्यान्सर अमेरिका र यूरोपभन्दा एशिया एवं अफ्रिकामा कम देखा परे पनि यस सम्बन्धी जनचेतनाको कमी, गरीबी तथा महिला शिक्षाको कमीका कारण ढिलो गरी पहिचान हुन्छ। त्यो बेलासम्ममा स्तनको क्यान्सर हड्डी, फोक्सो, कलेजो, डिम्बाशय र स्नायु प्रणाली (दिमाग) सम्म फैलिसकेको हुन सक्छ।
५० वर्षभन्दा माथिका, आनुवंशिक खराबी भएका, ३५ वर्षपछि विवाह गरेर आमा बनेका, १२ वर्ष अगाडि नै महीनावारी शुरू भएका, मोटोपना भएका, अधिक वा लामो समयदेखि इस्ट्रोजेन सेवन गरेका, अधिक धूम्रपान तथा मद्यपान गर्ने, बढी चिल्लो तथा बोसोयुक्त खाना खाने महिलामा स्तन क्यान्सरको जोखिम बढी हुन्छ।
यसैगरी, वंशाणुगत कारणले पनि नजिकका नातेदारमा स्तन क्यान्सर हुन सक्छ। साथै, विवाह नगरेका, बच्चा नजन्माएका, बच्चा पाएर स्तनपान नगराएका र पहिले एउटा स्तनमा क्यान्सर भइसकेका महिलामा पनि यो रोगको जोखिम उच्च हुन्छ। २५ वर्षभन्दा कम उमेरका महिलामा स्तन क्यान्सरको दर कम रहेको विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धानले देखाएका छन्।
लक्षण, परीक्षण र उपचार
स्तनमा गिर्खा हुनु, स्तनको आकारमा परिवर्तन, मुन्टाबाट रगत वा पिप बग्नु, स्तनको छालामा सुन्तलाको बोक्रामा जस्तो स–साना प्वाल देखिनु, मुन्टा भित्र धसिनु आदि स्तन क्यान्सरका लक्षण चिह्न हुन्। यस्ता लक्षण देखिइसक्दा पनि दुखाइ भने प्रायः नहुने भएकाले स्तन क्यान्सरले धेरैलाई झुक्याउँछ।
निर्वस्त्र भएर ऐना अगाडि उभिंदा, श्रीमान्ले स्तन चलाउने क्रममा वा स्वास्थ्य परीक्षणको बेला माथि उल्लिखित लक्षण भेटिन्छ। त्यसक्रममा शंका लागे म्यामोग्राफी भनिने विशेष खालको स्तनको एक्सरे गराउनुपर्छ। म्यामोग्राफीबाट स्तन क्यान्सरको शुरू अवस्था पत्ता लाग्छ। ४० वर्ष नाघेका तथा अन्य कारणले स्तन क्यान्सरको जोखिममा रहेका महिलाले म्यामोग्राफी गराउनु राम्रो हुन्छ।
स्तन क्यान्सरको निदानका लागि एफएनएसी (स्तनमा आएको गिर्खा वा गाँठागुठीमा सियो छिराएर सियोमा अट्ने जति मासु वा श्रावको जाँचबाट गरिने) परीक्षण गरिन्छ। यसबाट ९८ प्रतिशतसम्म रोग पत्ता लाग्न सक्छ। एफएनएसी जाँचको नतीजा अस्पष्ट भएमा स्तनको प्रभावित भागबाट सानो अंश मासु निकालेर प्याथोलोजी ल्याबमा परीक्षण गरिन्छ।
स्तन क्यान्सर निश्चित भएपछि क्यान्सरको चरण, बिरामीको अवस्था तथा अन्यत्र फैलिए नफैलिएको आधारमा शल्यक्रिया, रेडियोथेरापी, केमोथेरापी, हर्मोनथेरापी वा बिरामीलाई केवल माया, पोषण र पीडा कम हुने औषधि दिनुपर्ने हुन्छ।
जहाँसम्म रोकथामको कुरा छ, स्तनमा गाँठागुठीको अलावा माथि उल्लिखित लक्षण चिह्नहरू देखापर्ने बित्तिकै परीक्षण गराइहाल्नुपर्छ। त्यसको अलावा धूम्रपान नगर्ने, चिल्लो तथा बोसोयुक्त खाना कम खाने, तौल नियन्त्रणमा राख्ने र बच्चा पाएपछि स्तनपान गराउनुपर्छ। प्रांगारिक फलफूल, सागसब्जी र रेसादार खानाले सबैखाले रोगबाट बचाउँछ।
डा सुमन ताम्राकार, हिमाल खबरबाट